Ivenkile yokuThengisa kwindawo yokuThengisa kwiVenkile | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septemba 6, 2013 NgeCawa, ngo-Epreli 26, 2020 Douglas Karr
Uyazi ukuba usebenza kumzi-mveliso ombi xa iinkqubo zakho ziphelelwa lixesha ngenxa yecandelo le-Intanethi elisebenza ngasemva. Le yeyona ndawo yokuthengisa. Xa ndisebenza kwitekhnoloji yokuthengisa kwiminyaka embalwa eyadlulayo, iinkampani ze-POS zazizizigebenga ezintle kakhulu. Sifuna ukusebenza nabo kwaye sidibanise nabo, kodwa basibona njengesoyikiso kwaye basikhupha. Uninzi lwayo mhlawumbi kungenxa yokuba itekhnoloji yabo yayimbi. Babesasebenza kwi-199x ujongano lomsebenzisi, babenemicimbi yezokhuseleko enkulu, kwaye ishishini labo lalintle kakhulu ngokuthengisa iikhompyuter zedesktop enezikrini zokuchukumisa amaxesha amathathu ngaphezulu kunokuba befanelekile.
Ndonwabile ukubona olu phuhliso kwi-Engadget, Iqonga elidibeneyo lokuthengisa likaShopify lidibanisa ukuthengisa kwi-Intanethi nakwiivenkile.
Ivenkile yePOS sisicelo se-iPad esikuvumela ukuba uthengise iimveliso zakho zevenkile Ivenkile kwindawo ebonakalayo, yokuthengisa. I-POS yenza konke ukudityaniswa kunye nokunxibelelana phakathi kwe-Intanethi kunye ne-intanethi kungabalulekanga kuba zonke iimveliso, abathengi kunye neeodolo zonke zikwindawo enye-kwi-Intanethi.
Abathengisi akusafuneki ukuba balandele uluhlu lweempahla ezininzi, iikhathalogu zemveliso kunye neenkqubo zokuhlawula. Ivenkile ihlanganisa yonke imiba yeshishini lakho lokuthengisa kwelinye iqonga ekulula ukulisebenzisa eliza neswiper yekhadi ekwamkeleni iVISA, MasterCard kunye namakhadi etyala eMelika Express. Ngomfundi wabo wekhadi, ufumana amaxabiso amahle okuhlawula- i-2.1% + 30 ¢ kuwo onke amakhadi etyala. Akukho zintlawulo zifihliweyo okanye iindleko ezinzima.
Ungahlaziya indawo yakho Inkqubo yokuthengisa kunye nezixhobo yenzelwe i-Shopify POS, kubandakanya umfundi wekhadi letyala, idrowa eyimali, ukuma kwe-iPad kunye nomshicileli wokufumana. Uku-odola kwi-Intanethi kunye nokuhambisa simahla.
Ngokwam, ndiyakuthanda ukubona oku. Andikwazi kulinda de ezinye zeenkampani ze-POS zingabikho kwishishini lokunyanga abathengi kunye namaqabane abo.
tags: inqaku lentengisoposthenga